एनआईशी एशिया र गृहका अधिकृतको कनेक्शनमा सीईओका बाउछोराले पाए पदक ! « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
एनआईशी एशिया र गृहका अधिकृतको कनेक्शनमा सीईओका बाउछोराले पाए पदक !
सर्वसाधारणको निक्षेपबाट मूनाफा कमाएर मनपरी खर्च गर्ने गरेको एनआईशी एशिया बैंकले सरकारी पदक पाउन समेत आर्थिक शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । अनलाइनपानालाई प्राप्त जानकारी अनुसार एनआईशी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेले आफू र आफ्नो बुवालाई पदक दिलाउन गृह मन्त्रालयसम्म सेटिङ गरेको श्रोतले बताएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत विमल पौडेलकी श्रीमती उषा पौडेल सुरुमा सेञ्चुरी बैंकमा कार्यरत थिइन् । उनी सेञ्चुरी बैंक छाडेर प्रभु बैंक पुगिन । प्रभु बैंकमा उनले बैंकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिनन् । जसका कारण उनी फेरी सम्भावना खोज्दै अर्को कुनै बैंकमा जाने तयारीमा थिईन् । यसै सिलशिलामा शाखा अधिकृत पौडेलकी श्रीमतीलाई आकर्षक पद र सेवा सुविधा दिने गरी सीईयो न्यौपानेकै सीफारिसमा गत वर्ष मात्रै एनआईशी एशियामा नियुक्त गरियो ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार बैंकका सीईओले गृह मन्त्रालयमा आफ्नो नाम पदकका लागि सिफारिस गरिदिने शर्तमा पौडेललाई आफ्नो बैंकमा लगेका हुन् ।
सीईओ न्यौपानले पदक पाएको दोस्रो वर्षमा फेरी आफ्नै बुवालाई पदक दिलाउन सफल भए । “पदकका लागि बैंकबाट अन्य कर्मचारीको नाम समेत सिफारिस गरिएको थियो । तर एउटा सस्थाबाट धेरै जनाको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने भएपछि अन्यको नाम काटेर सीईओ न्यौपानेका बुवाको नाम राखियो, ” स्रोतले भन्यो । उनका बुबा आफैमा राजनीतिक व्यक्ति भए पनि पदकका लागि गृहमन्त्रालयले सिफारिस गर्न सहज थिएन, त्यसैले पनि सीईओ न्यौपानेले नाम सिफारिसका लागि सहजिकरण गरिदिए गृह मन्त्रालयका कर्मचारी विमलकी श्रीमती उषालाई बढुवा दिएर सहायक म्यानेजर (एएम) बनाइदिने कवुल गरेका छन् ।
अचम्मको कुरा त के छ भने एनआईशी एशिया बैंकमा लामो समयदेखि काम गरेका अब्बल कर्मचारीहरु जो बढुवाका हकदार हुन् उनिहरुलाई बेवास्ता गर्दै उनै पौडेलकी श्रीमति उषालाई नै माथिल्लो तहमा लैजान बैंकका निर्देशक निकुञ्ज अग्रवाल र सीइओ न्यौपाने लगाएत हात धाेएर लागि परेका छन् । यता सर्त कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गृहका तत्कालीन शाखा अधिकृत पौडेलले सीईओ न्यौपानेलाई दबाव दिइरहेका छन् ।
यस सेटिङका विषयमा अनलाइनपानालाई जानकारी आएपछि हामीले एनआईशी एशिया बैंकलाई पटकपटक सम्पर्कको प्रयास गर्यौ । तर बैंकका सीईओ न्यौपानेदेखि अन्य कुनै अधिकारीहरुले समेत फोन उठाएनन् । बैंकका सूचना अधिकारी सुधिरनाथ पाण्डेले फोन उठाएर अनलाइनपानाका प्रतिनिधिलाई कार्यालय बोलाएका समेत थिए ।
एनआईशी एशियाको कार्यालय पुगेका प्रतिनिधिलाई आफैले बोलाएर पनि भेट्ने समय छैन भन्दै बैंकले फर्काएको थियो । बैंक श्रोतका अनुसार सीईओ न्यौपानेले अनलाइनपानाबाट आएको फोन नै नउठाउन बैंकका माथिल्लो तहका सबै कर्मचारीहरुलाई उर्दि नै जारी गरेका छन् ।
यस विषयमा बुझ्न हामीले शाखा अधिकृत पौडेललाई समेत सम्पर्क गर्यौ । पौडेलले आफू गृहमन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा भइसकेको भन्दै यस विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने बताए ।
याे पनि पढ्नुभयो ?
एनआईशी एशिया बैंकका सीईओ न्यौपाने र सरोज भट्टराई कनेक्सन, सर्वसाधारणको पैसामा मनपरी
सीईओको बुवालाई पदक दिलाउन एनआईसी एशिया बैंकको ‘सेटिङ’
एनआईशी एशियाका सीईओ न्यौपाने : ५० लाखमा अवार्ड खरिद, प्रचारमा ‘स्टण्ड’
‘गोबर गणेश’ सीईओलाई सरकारको पदक !
प्रकाशित मिति : बैशाख २७, २०७९ मंगलबार २ : ०८ बजे